Haleloia sy hosana ho an'ny PHAT | Hevitra MPANOHARIANA |
Haleloia sy hosana ho an'ny PHAT
2012-06-11 @ 11:02 in Ankapobeny
Akory ny hasoan'ny zava-bitanao ry mpitondra mahefan'ny fahefana Avon'ny tetezamitatra efa anatin'ny repoblika fahaefatra? Na ny zaza miana-mandeha aza ataoko fa mahita ny rentirenty sy ny fanjelanjelatry ny tanàna amin'izao ankatoky ny tsingerintaonan'ny fiverenan'ny fahaleovantena Malagasy izao (Ny eto Antananarivo no hitako). Fantatrao dieny mialoha fa ho ampoka sy feno ny hafalian'ny olona miatrika izany. Efa voavinavinanao fa tsy ho ampy hiravoan'ny olona raha izay iray na roa andro hilanònana ho amin'izany ka dia natsanganao tapabolana mahery mialoha sahady ny podium nabahana ny lalana etsy Anosy anoloan'ny Radio Nasionaly Malagasy.
Tsy maintsy nataonao izany hitsinjovana ny sehatra goavana tsy antonona raha tsy arabe efatra andalana. Eo rahateo no faritra malalaka eto Antananarivo ankoatra ny kianja efa nofefena hitandroana ny fahadiovan'ny tanànan'Antananarivo. Fantatrao fa io no androm-panafahana ny sorisory taorian'ireny fanelingelenana amin'ny alalan'ny grevy isan-karazany ireny ka hanehoan'ny vahoaka iray manontolo fa miara-dia aminao mpitondra ry zareo. Ny vahoaka madinika no tena maro an'isa amin'ity firenena ity ka ireo no tena tsinjovinao mba ho mamy hoditra eo amin'ny Malagasy iray manontolo tsy mivaky ianao. Tsy maninona na dia voatery hioadina aza ny fiara rehetra mpandalo amin'iny faritra iny satria tsy misy hery miala avy amin'ny fandehanana fiara, ary tsy misy havizanana manatrotraka avy raha mba miodina mitady lalan-kafa izy ireny satria ny lasantsy ihany no mety hisy akony kely, saingy kely ihany ny volan'olona miala amin'izany. Tsy dia ahoantsika loatra ny fitohanana aterak'ilay lalana tapaka fa ny fitohanan'ny fiara no porofo mitohoka amin'ny tendany fa mandroso be ny olona no efa manana fiara, ary rehefa be tahaka izany dia midika izany fa mandroso ny firenentsika. Dera ho anao ry mpitondra!
Efa maminavina sahady ny saiko fa raha izao aza efa mifaly sy mitsinjatsinjaka ny olona, angamba rehefa tonga ny 26 jona 2012 efa tafakatra velona any an-danitra avokoa isika Malagasy rehetra. Angamba rehefa tonga ny fetim-pirenena ho podium kely avokoa ny faritra be olona manerana an'i Madagasikara, hiravo sy hifaly manatrika ny artista malagasy, horakora-pitsinjahana no hameno ny lalana sy ny arabe rehetra. Hihinjitsinjitra manerana ny lalana kosa ny omby sy ny akoho amam-borona ho nofon-kena mitam-pihavanana. Hihinana sy hiletra izay laniny ny tsirairay, ho voky sy hahara-dia ny namany avokoa ny rehetra. Mbola mety hisy ny tsy ampoizina hafa hataoanao fanomezana ho an'ny vahoaka Malagasy. Dera ho anao sahady ry mpitondra amin'izany vinavina azo tanterahana soa aman-tsara izany!
Tsy izay ihany fa misy tahaka izao koa, raha kivy dia kivy ny mpitia ny baolina fandaka fa baolina valo ihany no saiky azon'ny TVM omena ny mpijery Euro 2012 ilay fifaninana anisan'ny faratampony sy mahafinaritra manerantany, indro ny tananao sy ny herimponao, indro ny fitiavana avy aminao sy ny fahalalahan-tanana mampiavaka anao, ny hambom-po sy ny fitiavan-tanindrazana efa nasandratrao avo, fa nahafoy vola ho famalifaliana ny Malagasy. Talentanao io ary izay no nametrahana anao ho eo amin'io toeram-boninahitra io: hamalifaly ny Malagasy! Hanome fahafaham-po ny Malagasy! izay no notadiaviny sy nifidianany anao tamin'ny 60% mahery. Natolotrao ahy ho hitany avokoa ny lalao rehetra mandeha amin'izany Euro izany. Vola avy aminao, hoy ny naverimberina, no nanaovanao izany ka tsy misy volam-panjakana mihitsy, vola madiodio avy aminao, hoy ny fandre. Toy ny tenin'ny Soratra masina izany ka ekena tsy misy adihevitra, ary ataoko fa mitovy hevitra amiko avokoa ny mpamaky rehetra eto. Somary mampanahy fotsiny, nefa mariky ny harena eto Madagasikara sy ny olona ao aminy fa misy ny olon-tsotra toa anao manana harena atolotra ny vahoaka hamalifaliana ny vahoaka noho ny fanjakana mijoro. Dera ho anao ry mpitondra!
Raha tsy mitovy hevitra amiko moa ny mpamaky ataoko ahoana fa samy manana ny safidiny io. Eny fa na izaho aza moa tsy mitovy hevitra amin'izay ambarako loatra nefa izay ilay fahalalahana! Dera ho anao ry mpitondra!